Ukuba ufuna ukwazi ukubeka i-Amazon kwi-intanethi malunga neenkcukacha eziphezulu ezifanelekileyo-sele usendaweni efanelekileyo. Ngaba uyazi ukuba iphepha lokuqala lemiphumela yophando kwi-Amazon ithola ngaphezu kwe-60% yendlela yokukhangela jikelele evela kubathengi abaphilayo befuna izinto ezithengiswa ngaphaya kwalapho? Ngoko, kuthetha ukuba ukufuphi kwakho kufikelele kwi-Amazon yomkhiqizo wokukhangela amagama angundoqo afanelekileyo kunye nemigca yokukhangela emide.Kodwa indlela yokubeka i-Amazon kwiindawo eziphambili ezifanelekileyo, ngokukodwa ukuba usengomthengisi we-novice nje nje uthatha amanyathelo okuqala kuloo ndawo yemakethe ephakamileyo? Impendulo emfutshane kukuba - ukuqonda amagama angundoqo kunye neempawu zabo eziphambili ezibonwe kwimbono ye-A9 yokusesha i-algorithm. Ngoko, ngaphantsi ndiza kukubonisa indlela yokubeka i-Amazon kwibala - ngokunika isikhokelo esifutshane kwizinto eziphambili ezijoliswe kuzo kunye nendlela efanelekileyo yokuzichonga apho.
I-Jungle Scout - yintengiso enye-ntengiso kuyo yonke intengiso ye-intanethi.Ngaphandle kwenkcazelo yegama elingundoqo, i-Jungle Scout yabonisa ukuba luncedo kakhulu xa kufikelele ekufuneni amathuba emveliso emitsha, okanye imfuneko yokufumana ingcamango ebalulekileyo yokuncintisana ngokubalulekayo - zombini kwimveliso enenzuzo, kunye negama eliqhelekileyo elingumsila. idibaniso eziyimfuneko ukuba zibekwe Source .